Semalt: Kacha ọhụrụ na teknụzụ chekwaa ọtụtụ nde nke ndụ
Ross Barber, Semalt Onye ahịa na-aga nke ọma, na-aga ịkọ akụkọ dị egwu otú UNICEF si enyere ndị ntorobịa aka iji nchịkọta SMS na-ekwu okwu ya bụ U-Report.
Ndị mmadụ na-echekarị UNICEF ka ọ bụrụ maka mkpa nke ụmụaka ebe ọ bụ na nzukọ a echekwala ọtụtụ ndị ntorobịa. N'ụzọ doro anya, ọ na-anọgide na-egosipụta onwe ya na mmeghachi ọsọ ọsọ ha na Hurricane Irma. Tinyere U-Akuko, usoro nyocha SMS nke nwere njirimara kachasị mma, ha nyere ozi na ntuziaka nchedo nke ọma na ndi nwere ike ime. Ọ bụ ezie na ọ bụ nanị akụkọ dị mfe, ọ dịkwa nnọọ mma.
Arịrịọ maka Ime Ngwa Ngwa
Na September 2, òtù UNICEF Latin America na Caribbean nọ na ndị ọkachamara site na UNICEF Global Global Innovation Centre. Ihe kpatara nke a bụ ịmepụta U-Report na Caribbean na iji kwalite ya na Facebook, dịka mmeghachi omume maka mmelite nke trajectory Hurricane Irma.
Otu Ụzọ Na-eme Mmasị
Nkọwapụta nkwurịta okwu ọhụrụ, aha ya bụ U-Report, na-eji nsụgharị SMS ma ọ bụ ederede na-abịa na njikarịcha oyiyi, maka nchịkọta dị mfe ma na-agbasa ozi dị mkpa, nke na-azọpụta ndụ maka nwata ahụ. Ọzọkwa, ngwa ahụ na-eme ka ọ pụta ìhè na ha ga-ekwupụta nsogbu ha na ịrịọ maka enyemaka. N'ihi ya, U-Report dị mkpa dị ka mgbanwe ọhụrụ maka ọdịmma nke ndị mmadụ..
N'oge gara aga, a na-eji U-Report mee ihe iji gbochie mgbasa nke nje Ebola na-egbu egbu na Liberia azụ na 2014. Site na ngwa ahụ, UNICEF na òtù ndị nwere mmekọ nwere ike izipu ntuli aka iji chọpụta nsogbu ndị mmadụ na-enwe ma soro ha kerịta ozi nduzi na nduzi dị ndụ.
Isi Iyi nke Ozi
N'ime umuaka nde mmadu iri na nde iri bi na mba ndi na-aga imegide oke agha Irma, ihe di ka okara n'ime ha kwuru na U-Report bu isi iyi nke ozi na nchedo di. Mgbe oké ifufe ahụ na-agafe, UNICEF ka na-eji usoro ikpo okwu eme ihe iji kpokọta ozi gbasara ebe ndị ntorobịa chọrọ enyemaka. Mgbe nke ahụ gasịrị, UNICEF nwere ike ịmalite ịzaghachi azịza ndị e nyere maka mkpa ndị metụtara.
Ụlọ ọrụ na-abata na Copenhagen
Na nzaghachi nye ndị nọ ná mkpa, UNICEF's Supplies Division nke dị na Copenhagen malitere ime ihe. N'ebe ụlọ nkwakọba ihe kachasị n'ụwa, ha nwere ike inye aka ndị enyemaka. Ugbu a, ha amalitela ịkwakọba ihe na ibudata ụgbọ elu.
Olileanya agaghị anwụ ma ọlị
Site na sistemụ SMS ha, U-Report, UNICEF jisiri ike mee ngwa ngwa na ọdachi na-abịanụ, ebe ọ na-enye nwata ahụ ihe ọmụma na nkwupụta okwu. N'ihi U-Report, ya na nkà na ụzụ texting ya na njikarịcha ọdịyo, ntụziaka nchekwa dị ngwa gbasaa n'ime iri na ọkara nde ndị na-eto eto bụ ndị na-eche ihu ifufe ahụ, na-azọpụta ọtụtụ ndụ. Ugbu a, UNICEF na-eziga nri ndị ọzọ na ihe enyemaka ndị ọzọ. N'ozuzu ya, olile anya agaghị anwụ ma ọ bụrụhaala na ndị mmadụ na-anọgide na-arụ ọrụ n'inyere ndị ọzọ aka.